आफूलाई आइपरेका सम’स्याहरुको समा’धान कसरी गर्ने ? जान्नुहोस : – Sadhaiko Khabar
आफूलाई आइपरेका सम’स्याहरुको समा’धान कसरी गर्ने ? जान्नुहोस :
प्रकाशित मिति: सोमबार, आषाढ १४, २०७८ समय: ७:५१:११
हामीले तपाइँहरुलाई हरेक दिन प्रेरणादायी कुराहरु दिने गरेका छौँ । प्रेरक भनाईहरु, मन छुने लाईनहरु, जीवनशैली, व्यक्तित्व विकास र साथ्साथै सुन्दर जीवनको लागि स्वा’स्थ्य सम्बन्धि जानकारीहरु पनि पस्किने गरेका छौ । आशा छ हाम्रो यी जानकारीहरुले तपाइँहरुलाई केहि न केहि सहयोग अवश्य पनि पुर्याइरहेको छ । आज पनि हामीले यहाँ तपाइँहरुको माझमा एउटा जानकारीमुलक कुरा लिएर आइसकेका छौ ।
जहाँ सफलता हुन्छ त्यहाँ स’मस्या पनि हुन्छ अनि जहाँ सम’स्या आउँछ त्यहाँ सफलता पनि पाइन्छ । किनभने चिनी भएको ठाउँमा कमिला जसरी पनि आउँछ । कमिला आउनु कमिलाको दो’ष होइन ,दो’ष त हामी आफैले त्यहाँ चिनी खुल्ला राख्नु हो । जीवनमा जे जति सम’स्याहरु आउँछन् ती सबैको कारण हामी आफै नै हो । हाम्रै साना-ठूला ग’ल्तीका कारण नै पनि कतिपय सम’स्याहरू आउने गर्छन् ।
स’मस्या पनि त्यहि चो’र वि’रालो जस्तै हो । चो’र विरा’लोले के गर्छ भने तपाईले जति पि’टेपनि, भ’गाए पनि फेरि आएर तपाईको स’मस्या बनिदिन्छ । चो’र वि’रालो, प्राकृतिक मौसम , उ’डुस र डुलु’वा कु’कुरलाई हाम्रो अधि’नमा ल्याउन सकिदैन । तिनीहरु जति स’जाय दिए पनि सधै हाम्रो स’मस्या बनिरहन्छन् । सम’स्या दिनु तिनीहरुको ग’ल्ती होइन, किनभने तिनीहरुको वि’वेक नै छैन ।
अन्तत: सम’स्या त हामी आफै तिनीहरुबाट फु’त्कीन नजा’नेर बनेको हो । डुलु’वा कु’कुर डुल्दै डुल्दै आउँछ र तपाईले सफा गरेको ठाउँमा वा तुलसिको मठमा पि’साव गरेर जान्छ । त्यसलाई के गर्ने ? ठो’क्ने ? अह ठो’क्न मिल्दैन, त्यसलाई पनि दु’ख्छ नी, कतिपय मन्छेको बानी पनि त्यहि हून्छ डु’लुवा कु’कुर र विरा’लाको जस्तै हुन्छ ।
ठिकै छ ती त जना’वर भए बुद्धी हु’दैन तर सोच विचार गर्न सक्ने विवेक भएको मान्छेले पनि बु’द्धीले काम गर्न जानेन भने जीन्दगीमा साहै दुः’ख पाउँछ उसले । हामिले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने सम’स्या जीवनमा आउँछ आयो भनेर सम’स्यासँग पि’डित भएर नि’राश हुने होइन त्यो सँग बुद्धीले जु’ध्न सक्नु पर्दछ ।
हामीले एउटा सम’स्यालाई समा’धान गर्नासाथ त्यो भन्दा ठुलो अर्काे सम’स्या हाम्रो अगाडि ख’डा हुन्छ । तर बुद्धी र विवेकको प्रयोग गर्न सकेमा सम’स्या आफै डरा’एर भाग्दछ अर्थात प्रत्येक सम’स्यामा समा’धान देख्न सकिन्छ । स’मस्या सँगसँगै समाधान पनि जोडिएर आएकै हुन्छ । हामीले त्यसलाई चिनेर हरेक सम’स्याको उपयुक्त समाधान गरेर अघि बढ्न मात्र सक्नुपर्दछ ।
सबैभन्दा पहिले हामीलाई परेको सम’स्याको कारण पत्ता लगाउन सक्नुपर्दछ । सम’स्या के कारणले आयो ? यसमा मुख्य दो’ष वा ग’ल्ती केही छ कि ? त्यो बुझ्नु जरुरी छ । जसले हामीलाई भोलिका दिनमा त्यस्ता सम’स्या फेरि दोहोरिन नदिन मदत गर्दछ ।
त्यसपछि त्यो सम’स्याको अ’सर वा प्रभा’वका बारेमा सोच्नुपर्दछ । त्यसले आफुलाई के कस्तो अ’सर गरिरहेको छ ? त्यो बुझ्नु पर्दछ । खासै ठूलो अ’सर गरेको छैन भने वा’स्ता नगर्दा नै राम्रो हुन्छ तर ज’टिल सम’स्या छ भने निकै नै बुद्धिमानीपूर्वक कदम चाल्नु पर्दछ ।
त्यसपछि आयो समा’धानको उपाय : आफू एक्लैले गर्न सकिने समा’धान छ भने एक्लैको प्रयासले अघि बढ्न पनि सकिन्छ तर अरु कसैको साथ चाहिने अवस्था छ भने समस्या नलु’काई आफ्नो परिवार साथीभाइ वा त्यस्तै मन मिल्ने र भलो चिताउने मान्छेलाई खुलेर आफ्ना सम’स्याहरु भन्ने रा उनीहरूका कुरा पनि सुन्ने गर्नुपर्दछ ।
याद गर्नुहोस्, स’मस्या तपाईंलाई मात्र होइन अरु जोकोहि ब्यक्तिलाई परिरहेकै हुन्छ । साथ सहयोग चाहिने अवस्था छ भने आफूले पनि अरूलाई सहयोग गर्ने र अरूबाट पनि आफूले सहयोग लिने गरेमा सम’स्या हलु’का भएर जान्छ ।
कतिपय अवस्थाका समस्याहरू तत्का’लै स’माधान नहुने खालका पनि हुन सक्छन् । यदि त्यस्तो अवस्था छ भने तपाईंले आ’त्तिने, चि’न्ता गर्नेभन्दा पनि त्यो सम’स्याभित्रै पनि रमाएर आफ्ना नियमित कामहरू अघि बढाईरहनुपर्छ । निरन्तरको प्रयास भएमा निश्चित समयपछि स’मस्या पनि आफै घ’टेर/ह’टेर जाने गर्छ ।
जस्तोसुकै क’ठिन अवस्था आएपनि तपाईंले पनि जीवनमा निरन्तर अगाडि बढि नै रहनुपर्छ । किनकि परिस्थिति कसैलाई पनि सधैं क’ठिन मात्र हुँदैन अनि सजिलो मात्र पनि हुँदैन । आफ्नो र अरूको सधैं भलो चिताएर अघि बढ्नुहोस् सम’स्या माथिको जि’त सधैँ तपाईंकै हुन्छ ।
नोट : तपाईहरुलाई हाम्रो प्रेरक जानकारी कस्तो लाग्यो ? यदि हाम्रो यो जानकारीले अरुको जीवनमा पनि परिवर्तन ल्याओस भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो लेखलाई शेय’र गर्दिनुहोला । तपाइको एक शे’यरले थाहा नभएका हरुले ज्ञान पाउनेछन् भने हामीलाई पनि सहयोग मिल्नेछ ।